thinzar's blog: Workshop တစ်ခုမှ ရရှိခဲ့သော ဗဟုသုတများ
MIT Open Course Ware ထဲက Structure and Interpretation of Computer Program ဆိုတဲ့ Course အတော် မိုက်တယ်။ LISP မျိုးကွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MIT Scheme နဲ့ သင်တာလေ။
Textbook ကိုလည်း Online မှာ ဖတ်လို့ ရတယ်။ ဥပမာတွေက LISP နဲ့ ရေးထားတာပဲ။
အဲဒီ Course နဲ့ အဲဒီစာအုပ်လေးတော့ အတော် သဘောကျ မိတယ်။
31/3/09 1:56 PM
(format t "~a" "Nice article, the first article in Burmese about lisp, that I have ever seen.")
ZT>> လင့်ခ်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။ LISP အကြောင်းကို အခုမှ သိတော့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ အတော်ဘဲ ဖြစ်သွားတယ်။ MIT OCW ကိုလည်း တစ်ခါမှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မထိုင်ဖတ်ဖြစ်သေးဘူး။ ဒီတစ်ခုကနေ စပြီး ဖတ်ကြည့်မယ် :)
trh>> အစ်မက အခုမှ LISP ကို (print "Hello World!") လောက်ဘဲ သိသေးတာ။ ကောမန့်ထဲမှာ ဘာရေးထားလဲဆိုတာ LISP debugger မှာ သွား run ကြည့်ရသေးတယ်။ း-)
31/3/09 9:04 PM
အထင်တွေ ကြီးနေပြန်ပြီ။ ကျနော်လည်း Hello World ပဲ သိတာပါ။ နည်းနည်း လူရှိန်အောင် print နဲ့ မရေးပဲ format နဲ့ ရေးထားတား ... ;)
Structure and Interpretation of Computer Program ကတော့ ဖတ်ရတာ ပျင်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။ Practical Common Lisp ဆိုတာလေး မဆိုးဘူး။ ဟောဒီမှာ အလကား ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်။ http://www.gigamonkeys.com/book/
31/3/09 9:20 PM
I think most of engineering application such as modelling still uses FORTRAN and still popular among the engineers.
My opinion on why Japanese cannot copy American softwares because they are being Japanese. If they want to become software giants in the world, try to hire Indian Programmers (they are the best in the world, and American make use of them)
6/4/09 9:58 PM
trh>> ဟုတ်တယ်နော်။ အဲဒီ စာအုပ်လေး ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ chapter4ရောက်ပြီ။ :)
Feroz>> Yes. It is still used in some engineering applications. But not popular among software engineer anymore. I have never learnt FORTRAN, so I'm not really sure about it's powerfulness. I presume that FORTRAN is mainly for mathematical applications. But LISP is the first language to introduce the software engineering concepts like conditionals, function type, recursion, garbage collection etc.
Aha..yeah..Japanese are trying the wrong way. They should learn from Americans and hire Indians to beat American softwares :D Thanks4dropping comments!
7/4/09 10:17 AM